192.168.8.2 - Ukungena komqondisi - Igama lomsebenzisi nephasiwedi
192.168.8.2 Ingabe i-IP ethile igcinwe ukusebenzisa iphaneli yokulawula yama-routers. Lokhu nama-IP amaningi afana ne- 192.168.77.1, 192.168.123.1, 192.168.8.1, njll. yizindinganiso ezaziwa ngokuphelele emhlabeni wonke ze-router IPs. Ezincwadini, ibizwa nangokuthi "i-Default Gateway IP".
The http://192.168.8.2 Ikheli le-IP lifakwe kuhlu yi-IANA Internet Assigned Numbers Authority njengengxenye ye- 192.168.8.0 / 24 amanethiwekhi akude. Esikhaleni sangasese, ikheli le-IP alinikelwanga inkampani ethile futhi noma ngubani kufanele asebenzise ikheli le-IP ngaphandle kokuvumelana kwerejista yesifunda se-Intanethi njengoba kuchaziwe ku-RFC 1918, ehlukile kukheli le-IP lomphakathi.
Finyelela Ikhasi Lokulawula
Bhala nje 192.168.8.2 kwibha yekheli lesiphequluli sewebhu.
Etafuleni, ungasebenzisa ikhasi lomlawuli futhi uqiniseke nokuthi ungena ngemvume ku-PW. Ngokuchofoza isixhumanisi 192.168.8.2 ungafinyelela ngisho nokungena kuyo.
Futhi, uzothola yonke imiphumela yokubheka eyimfihlo 192.168.8.2 Ikheli le-IP.
Uma ufuna ukuthola ukungena ngemvume kwe-wireless, i-router, iphoyinti lokufinyelela, noma imodemu ungayisebenzisa ngokuchofoza nje kusixhumanisi se-HTTPS noma i-HTTP.
192.168.8.2 Ikheli le-IP lifakwe kuhlu ne Igunya Lenombolo elabelwe i-Inthanethi IANA njengegatsha lenethiwekhi eseqisiwe 192.168.8.0. Esikhaleni esifihliwe, ikheli le-IP alinikwanga inhlangano eyodwa kuphela, kanye ne-ISP, futhi wonke umuntu angasebenzisa amakheli anjalo e-IP ngaphandle kwemvume yokubhaliswa kwe-Intanethi yesifunda.
Bese futhi, amaphakethe we-IP aqhamuka kububanzi obungeke athunyelwe nge-Intanethi eyabiwe, ngakho-ke uma inethiwekhi enjalo ifuna ukunamathisela kwi-Intanethi, idinga ukufeza ngokusebenzisa isiguquli sekheli lokuxhumana (noma elibizwa ngokuthi yi-NAT) proxy noma iseva yesango. Umfanekiso wesango le-NAT kungaba yi-router engenantambo noma enentambo oyithola kumhlinzeki we-broadband.
Ngokuzama lokhu udinga ukufaka ibha yekheli 192.168.8.2 yesiphequluli sakho sewebhu osithandayo esifana neMozilla Firefox noma iGoogle Chrome nokungena ngemvume ngamagama abasebenzisi kanye namaphasiwedi ahlinzekwa umphakeli wakho.
Ungasebenzisa izinhlobo ezinjalo zamakheli we-IP amanethiwekhi angasese kumanethiwekhi wakho wangakini futhi uwabe kudivayisi efana nethebhulethi, i-PC, ama-laptops, nama-Smartphones. Umsingathi ungumnikazi wedivayisi 192.168.8.2 Ikheli le-IP.
Igama lomsebenzisi nephasiwedi ye-192.168.8.2